१३ हजार ६ सय रुपैयाँले स’स्तियो सु’नको भाउ, प्रतितोला कतिमा झ’र्यो ?
साउन २७, २०७८ बुधबार 44
काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा सुनको मूल्यमा भारी गिरावट आएको छ । नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य एक वर्षमा प्रतितोला १३ हजार ६ सय रुपैयाँले घटेको छ । गत वर्षको साउन २५ गतेदेखि यो वर्षको सोही दिनको तुलनामा सुनको मूल्य उक्त रकमले घटेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
गत वर्षको साउन २५ गते १ लाख २ हजार ६ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन यो वर्षको सोही दिनमा भने ८९ हजार रुपैयाँ कायम हुन आएको छ । गत वर्षको साउन महिनामा सुनको मूल्य १ लाख ३ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । जुन अहिलेसम्मकै उच्च मूल्य हो ।
आज (साउन २५ गते) सोमबार नेपाली बजारमा छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले घटेको हो । अघिल्लो दिन ९० हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य आज घटेर ८९ हजार रुपैयाँ कायम हुन आएको हो । महासंघले आजका लागि तेजावी सुनको मूल्य ८८ हजार ५५० रुपैयाँ निर्धारण गरेको छ । आइतबार ८९ हजार ५५० रुपैयाँमा खरिदबिक्री भएको थियो ।
Prevकाठमाडौँ तारकेश्वरका ४७ वर्षिय पुरुषले किन गरे आफ्नै घरमा देह’ त्या,ग ?
Nextछोराले प्रे’म वि’वाह गरेकी बुहारीलाई पहिलो पटक घरमा देखेर सासु बे’होस्
हार्दिक बधाई अन्जली अधिकारी र बिमल अधिकारी बिहे गर्दै … -भिडियो सहित